स्थानीय निर्वाचन प्रचार योजना र महत्व - Everest Dainik - News from Nepal
स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ। यसबारे पार्टीले सफल र सशक्त प्रचार योजना निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ। एकातिर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्र, सँगै बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन, अर्कोतिर भएका उपलब्धि पनि नामेट पार्न लागेका केपी ओलीको वरिपरि केन्द्रीकृत भएका प्रतिगामी शक्तिहरू ! त्यसैले स्थानीय निर्वाचन मुख्यतः अग्रगामी र प्रतिगामीबीचको लडाइँ हो। निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसहितका अग्रगामीहरू हावी हुन के हुनसक्छ त प्रभावकारी प्रचार योजना ? छलफल, सुझाव र परिस्करणको अपेक्षासहित केही प्राथमिकता र त्यसको राजनीतिक महत्वबारे उल्लेख गर्दछु।
उच्च प्रविधि अपनाउँदा हामीले परम्परागत प्रचार अभियानलाई बिर्सने गल्ती गर्नु हुँदैन। खासगरी जनतासँग भौतिक रूपमा नै एकाकार भएर गरिने प्रचारको तरिकामा हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ। हामीले ‘कनेक्सन’भन्दा ‘रिलेशन’लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उच्च प्रविधिको आफ्नै विशिष्ट महत्व छ तर प्रविधिमा मात्रै रुमल्लिएर हामीले जित्न सक्तैनौं। निर्वाचनको यो विशेष अभियानमा हामी उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट भाग्न सक्तैनौँ र भाग्न मिल्दैन पनि।
साम्राज्यवादी, विस्तारवादी वा सर्वसत्तावादी केन्द्रमा सामाजिक मिडियाले सकारात्मक प्रभाव पार्नु आम श्रमजीवी जनताको खुशीको कुरा पक्कै होइन तर श्रमजीवी पक्षधरहरूले पनि सामाजिक मिडियालाई आफ्नो हित अनुकूल प्रभावकारी उपयोग गर्न पहल गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधिमा हुँदै गएको अकल्पनीय विकासले सार्वजनिक हितमा निकै ठूलो चुनौती बढाइदिएको छ। साना देशहरूमा यस चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्षमता देखिदैन । यसका पूर्वाधार खडा गर्न नै समस्या उत्पन्न भएको छ। प्रविधिबाट सफलता पाएकाहरूका लागि पनि सोही प्रविधिले हानि पु(याउन सक्ने जोखिम बढेको छ। फेसबुकसहित विदेशी स्वामित्वमा रहेका सामाजिक सञ्जालले नेपाल जस्ता देशमा लोकतन्त्रसहित संस्कृतिमाथि समेत गम्भीर समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ।
प्रतिक्रान्तिको झण्डा प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा नै उठाउन राम र अयोध्याको प्रसंग ल्याएर देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले अभियान नै चलाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने र कम्युनिष्टको एक घटकका अध्यक्ष केपी ओलीको काँधमा बन्दुक राखेर अर्को कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध साम्राज्यवादी शक्तिले जनताको धार्मिक, साँस्कृतिक मनोविज्ञानमा खेलेर घृणा पैदा गराउने, धार्मिक हिंसा गराउने, प्रतिक्रान्ति गर्ने गुरुयोजना रचेको यथार्थलाई हामी माक्र्सवादीहरुले सहजै विश्लेषण गर्न सक्छौं।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पु(याएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, समानुपातिक र समावेशीको मुद्दालाई राज्य तह र दलहरुमा कार्यान्वयनका लागि माओवादीको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र पहल नै मुख्य भएकाले जसको नीति, उसैको नेतृत्वका लागि जनतालाई विनम्रतापूर्वक विशेष अनुरोध गर्नुपर्छ।
(लेखक माओवादी केन्द्रका प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उप–प्रमुख हुन्।)